फरेन्सिक डाक्टर नहुँदा पोस्ट मार्टममा समस्या, जटिल घटनाका शव काठमाडौँ लैजानुपर्ने बाध्यता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
फरेन्सिक डाक्टर नहुँदा पोस्ट मार्टममा समस्या, जटिल घटनाका शव काठमाडौँ लैजानुपर्ने बाध्यता
२०७६ आश्विन ११, शनिबार ०८:४५ गते
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टर नहुँदा जटिल प्रकारको पोस्ट मार्टममा समस्या परेको छ । मेडिकल अफिसरको भरमा पोस्ट मार्टम हुँदै आएको छ ।
दैनिक औसत ५ वटासम्म पोस्ट मार्टम हुने गरेकोमा यस अस्पतालमा केही वर्षदेखि चितवन मेडिकल कलेजका प्रो. डा. तेजप्रसाद चटौतले भरतपुर अस्पतालमा गई दैनिकजसो शव पोस्ट मार्टम गर्ने गरेका थिए । तर, अस्पतालले पोस्ट मार्टम गरेबापतको सेवासुविधा नदिएपछि विगत ३ महिनादेखि उनी आएका छैनन् ।
डा. चटौतमात्रै नभई पोस्ट मार्टम कार्यमा सहभागी हुने कर्मचारी देव आनन्द राईले पनि ३ महिनादेखि बिनातलब काम गरिरहेका छन् । अस्पताल प्रशासनले तलब नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
‘तलब नपाएकाले डा. चटौत आउनुभएन, मैले पनि ३ महिनादेखि पैसा पाएको छैन’, राईले भने, ‘अहिले पोस्ट मार्टमको काम नै प्रभावित बनेको छ ।’ एउटा पोस्ट मार्टम गरेको एक हजार डाक्टरले र २ सय रूपैयाँ आफूले पाउने भने पनि तोकिएजतिको तलब नपाएको राईको गुनासो छ । दुर्घटना, भवितव्य, कर्तव्यजस्ता घटनाको पोस्ट मार्टम चितवन जिल्ला र आसपासको भरतपुर अस्पतालमा हुने गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षको समय भएकाले तलब निकासा नभएको बताए । आन्तरिक स्रोतबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि यसतर्फ ध्यान नपुगेको उनले बताए ।
जटिल पोस्ट मार्टम काठमाडौँमा
आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित पोस्ट मार्टम भरतपुर अस्पतालमा हुन सकेको छैन । मेडिकल अफिसरले सामान्य प्रकृतिका मात्रै पोस्ट मार्टम गर्ने गरेका छन् । कुटपिटबाट मृत्यु, हत्या, शंकास्पद मृत्युजस्ता घटनाका शवहरु अहिले पोस्ट मार्टमका लागि काठमाडौँ टिचिङ अस्पताल लैजाने गरिएको छ । भरतपुर अस्पतालमै सम्भव यस प्रकृतिको सेवा लिन काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा जनतालाई सास्ती भएको छ ।
दरबन्दी छ, डा. छैन
६ सय शैøया रहेको यस अस्पतालमा फरेन्सिक डाक्टरको दरबन्दी हुँदा पनि पोस्ट मार्टम परीक्षणका लागि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् ।
फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा अहिले निजी मेडिकल कलेजबाट विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त गरी भरतपुर अस्पतालमा शव पोस्ट मार्टम गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी डाक्टर नहुँदा निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरले शवपरीक्षणको काम गरिरहेकोमा उनले पनि सेवासुविधा नपाएपछि काम छाडिदिएका छन् ।
समयमै पोस्ट मार्टम नभएको भनी गुनासो आउने गरेको भरतपुर अस्पतालका मेसु डा. श्रीराम तिवारीले बताए । विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा मेडिकल अफिसरबाट काम चलाइएको उनले बताए । अघिल्लो दिन अस्पताल लगिएको शव भोलिपल्ट अबेरसम्म पनि पोस्ट मार्टम नहुने गरेको मृतकका आफन्तहरुको गुनासो छ ।
यस अस्पतालका फरेन्सिक डाक्टर वीरेन्द्र मण्डल १ वर्षअघि सर्लाही अस्पतालमा मेसुका रुपमा सरूवा भएपछि अहिलेसम्म अर्को फरेन्सिक डाक्टरको नियुक्ति हुन सकेको छैन । मेडिकल कलेजहरुमा फरेन्सिक मेडिसिन अध्ययन हुने हँुदा यहाँ विशेषज्ञ फरेन्सिक डाक्टरहरु रहने गरेका छन् । १२ वटा शव राख्ने क्षमता भएको शवगृह रहे पनि बेवारिसे शव धेरै हुँदा कहिलेकाहीँ शवहरु खप्टाएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।